Ungenza njani blur kwiPhotoshop | Creatives Online
Ngaba ubusoloko ufuna ukwazi indlela yokwenza blur kwi-photoshop kodwa awukangeni emsebenzini de ube uwufuna? Nangona unokucinga ukuba kulula, inyani yeyokuba kufuneka uthathele ingqalelo imiba emininzi ukuyinika ukugqitywa kobugcisa. Kwaye, ngaphezu kwayo yonke into, ukukwazi ukuyidibanisa nemvelaphi, phakathi kwemifanekiso, okanye wenze umfanekiso ubonakale ucace ngakumbi.
Kodwa ukwenza njani? Apha siyakunceda ukuba uqonde indlela yokufiphalisa umfanekiso kwaye uwenze ngeendlela ezahlukeneyo kwiPhotoshop. Sukuphoswa yiyo!
1 Yima, yintoni ukubhuqa?
2 Faphaza ngePhotoshop
2.1 Smudge ngesixhobo sokufiphalisa
2.2 Faphaza ngebrashi
2.3 Isihluzi se-Gaussian blur
2.4 Ukukhanya kwebala
2.5 Ukufiphaza intshukumo
2.6 Ukufakelwa kwamabala
2.7 Ukufiphala komphezulu
3 Amanyathelo ukufiphalisa kwi Photoshop
3.1 I-blur kunye ne-Gaussian blur
3.2 I-smudge ngebrashi
Yima, yintoni ukubhuqa?
Ngaphambi kokukunika amanyathelo okufiphalisa kwi-Photoshop kubalulekile ukuba uqonde ukuba sibhekisa kwintoni ngokufiphalisa.
Eli gama ibhekisa ekususeni okunye ukucaca kwifotoAyikhanyi ncam, kodwa into, inkangeleko yomhlaba, umzobo okanye inxalenye yefoto ibonwa njengoluzizi.
Kutheni sifuna ukuyisebenzisa? Ewe, kuba oku kudala imvakalelo yentshukumo, isenza indawo esifuna ukuba sembindini wefoto ibonakale iyinyani.
Ukufezekisa oku, kusetyenziswa izixhobo zokufiphalisa, kodwa kufuneka wazi ukuba kukho izixhobo ezininzi zolu hlobo kwi-Photoshop.
Un Umzekelo ocacileyo wokuba kuya kuba yintoni ukufiphala kuxa sithatha ifoto eshukumayo. Njengoko uza kubona, ifoto iphuma ishukuma, kwaye kukuba ibamba intshukumo, yiyo loo nto umlinganiswa ongekho mfiliba uya kuvela. Kodwa kuthekani ukuba sifuna imvelaphi ibe mfiliba kwaye igcine inani eliphakathi lilungisiwe? Yiloo nto onokuyiphumeza ngeprogram yokuhlela umfanekiso.
Nje ukuba usicacise isigama, lixesha lokuba uqale ukusebenza. Kodwa ufanele ukwazi oko I-Photoshop ayinayo nje isixhobo sokuhlamba. Ngokwenyani kukho ezininzi omele wazi ukusukela, kuxhomekeke kumsebenzi wokwenza mfiliba ekufuneka uwenze, enye okanye enye iya kuba ngcono. Sithetha ngazo zonke.
Smudge ngesixhobo sokufiphalisa
Esinye sezixhobo zokuqala zeprogram yi-blur. Ayenzi nje le nto kumfanekiso, inokuphucula ukugxila ngelixa isongeza i-flair.
Esi sixhobo kwi Iphaneli yesixhobo ekhohlo kwaye iya kukuvumela ukuba wenze imvelaphi emfiliba, ukufiphala okunganzulwanga, njl.
Njengoko sisithi, ingaphezulu kunezinye izixhobo, kodwa iyasebenza kakhulu xa ufuna into egudileyo ukuqaqambisa intshukumo kwinto emiselweyo.
Esinye sezixhobo zokufiphalisa, ngaphandle kwamathandabuzo, ukusetyenziswa kwebrashi. Ngalo, uya kukwazi ukugudisa iindawo ezahlukeneyo kunye noncedo lwesixhobo sokufiphala, kunye nobukhulu obuthile bebrashi, uya kukwazi "ukupenda" kwezo ndawo ufuna ukubonakala ngathi kukho ukunyakaza.
I-advantage yesi sixhobo kukuba, ukuba awuyithandi indlela esikhangeleka ngayo, ungabuyela uqalise kwakhona nokuba akunyanzelekanga ukuba uqale phantsi, kuba iyakucima ngokwendlela obuyenza ngayo.
Isihluzi se-Gaussian blur
Esi sesinye sezona zixhobo zidumileyo zokufiphalisa kwi-Photoshop, kodwa eneneni, kwaye njengoko ubonile, ayisiyiyo yodwa enayo. Kule meko, Ukufiphala kweGaussian kukuvumela ukuba ulungelelanise uhlobo lwe-blur ukuyenza ihambe nesiphumo esibi.
Ukwenza oku, kufuneka uye kwicandelo kwizihluzi, ukufiphala kunye ne-Gaussian blur.
Emva koko kuya kuvela isikrini apho inxalenye yomfanekiso ivela khona. Kuya kufuneka ulungise inqaku eliba sembindini kwaye, kunye nephaneli esezantsi, misela ukuba ufuna ukufiphala kangakanani na.
Enye inketho yokufiphalisa yi I-radial blur, injongo yayo kukukwenza ukholelwe ukuba kukho ukujikeleza kwekhamera. Oko kukuthi, xa uthatha ifoto ikhamera iye yajikeleza idala ukufiphala okuthambileyo.
Kwezi meko kusebenza ngcono kakhulu xa kukho inqaku eliphakathi kuba into oyenzayo "kukuhambisa" imvelaphi yomfanekiso. Kodwa ukuba into oyifunayo kukufiphala kwendawo ethile, umphumo unokungabonakali kakuhle.
Khawube nomfanekiso wakho usemotweni ebaleka ngesantya esiphezulu. Into eqhelekileyo kukuba awukwazi ukwahlula izinto ezithile ozibonayo, kodwa uyazi ukuba zikhona. Ukuba uthathe ifoto, yonke into iya kuba mfiliba. Njengokuba, ngesihluzo isiphumo esifanayo siyafezekiswa.
Kumalunga nokunika intshukumo kumfanekiso ngokudlala nge-engile yokufiphala kunye nomgama.
Esinye isihluzo esinaso iPhotoshop kukufiphala kwelensi. Injongo yakho kukuba nika ubunzulu obungakumbi kumfanekiso, kodwa ikwenza oko ngokwenza ukuba yonke imbonakalo-mhlaba, imvelaphi okanye iziqalelo ezirhangqe loo ndawo isembindini zibonakale zimfiliba ngakumbi.
Into enhle kukuba inkqubo ikuvumela ukuba uhlele kwelinye icala umfanekiso ophakathi kwaye, kwelinye, indalo ngokwayo.
Njengoko besinixelele ekuqaleni, ukufunda ukwenza blur kwiPhotoshop kunokwenziwa nge injongo yokuxuba imifanekiso emibini okanye ngaphezulu kwaye zibukeka zifana, kodwa ngaphandle kokutshintsha imiphetho ngokwazo, akunjalo?
Ewe, ukwenza njalo, ungasebenzisa esi sixhobo, esikuvumela ukuba uphelise oko kukuthintela ukuba le mifanekiso mibini idityaniswe.
Amanyathelo ukufiphalisa kwi Photoshop
Njengoko sifuna ukwazi ukuba ungafiphalisa njani kwi-Photoshop, nanga amanyathelo ezixhobo ezimbini ezahlukeneyo:
I-blur kunye ne-Gaussian blur
Qala ngokuvula inkqubo kunye nomfanekiso ofuna ukuwufiphalisa. Okulandelayo, yiya kwiiFilters / Blur / Gaussian Blur.
Kwifestile evelayo uya kuba neradiyasi onokuyimisela kunye neglasi yokukhulisa enophawu 'thabatha' kunye nolunye olunophawu 'dibanisa'. Phakathi kwezi zibini unenani ngokwepesenti.
Oku kuya kukuvumela ukuba wonyuse okanye unciphise iradiyasi kunye nobunzulu xa usenza mfiliba.
Xa wanelisekile kukucofa ku-blur Ok kwaye iya kuyenza ngokuzenzekelayo kumfanekiso wakho.
Kulo mzekelo ungafiphalisa kuphela inxalenye yomfanekiso ukuba usebenzisa isixhobo sokukhetha kuqala.
Ukuba into oyifunayo kukwenza a i-blur ethambileyo kakhulu kwaye kuphela kwindawo yomfanekiso, kungcono ukusebenzisa ibrashi yobumnyama. Ukwenza oku, vula umfanekiso kwi-Photoshop kwaye, phakathi kwezixhobo onazo ngakwesobunxele, uya kubona ukuba kukho ukufiphala okuya kufana nomnwe okanye ibrashi. Kufuneka nje uyikhethe, uchaze ubungakanani kunye nobukhulu, kwaye ucofe ngayo emfanekisweni apho ufuna ukuba ibe mfiliba ngakumbi.
Ngaba uyayibona indlela elula kwaye yahluka ngayo onokuthi uyifiphale ngePhotoshop?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyenza njani blur kwiPhotoshop
Iifonti zeSerif ezisetyenziswa kakhulu